ယူအေးဖာ ချန်ပီယံလိဂ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ် (UCL အဖြစ်အတိုကောက်) သည် ဥရောပဘောလုံးအသင်းများအသင်း (UEFA) က စီစဉ်ပြီး ထိပ်တန်း ဥရောပကလပ်များကဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် ကလပ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲကို အနိုင်ရရှိသူများကို အုပ်စုနှင့်နောက်ကောက်ပုံစံဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဥရောပဘောလုံးပွဲတွင် အမျိုးသားလိဂ်ချန်ပီယံများ (နှင့်အချို့သောတိုင်းပြည်များအနေဖြင့် အသင်းတစ်သင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည်)ပါဝင်သည့်အမြင့်ဆုံးသော ကလပ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၁၉၅၅; ၆၅ နှစ် အကြာက (၁၉၅၅)
ယူအေးဖာ ယူရိုပါလိဂ် (2nd tier)
ယူအေးဖာ ယူရိုပါ ကွန်ဖရန်စ် လိဂ် (planned 3rd tier)
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် (6th title)
ရီးယဲလ် မဒရစ် (13 titles)
၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ဥရောပချန်ပီယံအဖြစ် လူသိများသော ဥရောပချန်ပီယံကလပ်များဖလားအဖြစ် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်ဥရောပ၏ပြည်တွင်းလိဂ်ချန်ပီယံများသာ ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင် ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး အနိုင်ရသူမှာ ဥရောပကလပ်ချန်ပီယံဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိအမည်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ အချို့သောနိုင်ငံများမှ ဝင်ရောက်လာသူများကို ခွင့်ပြုချက် ပေးခဲ့သည်။  ထိုအချိန်မှစ၍ တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ဥရောပ၏အမျိုးသားလိဂ်အများစုမှာ သူတို့၏ချန်ပီယံကို သာ ဝင်နိုင်သော်လည်း အင်အားအကောင်းဆုံးလိဂ်များသည် အသင်း ၄ သင်းအထိ ရှိသည်။ ချန်ပီယံလိဂ်အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောသူတို့၏အမျိုးသားလိဂ်တွင် နောက်တစ်ဆင့်ပြီးမြောက်သောကလပ်များသည်ဒုတိယဆင့် ယူအေးဖာ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ ၂၀၂၁ တွင် ယူအေးဖာ ယူရိုပါလိဂ် အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအသင်းများသည် ယူအေးဖာ ယူရိုပါ ကွန်ဖရန်စ် လိဂ် ဟုခေါ်သည့် တတိယဆင့်ပြိုင်ပွဲအသစ်တစ်ခုအတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မီလိမ့်မည်။ 
လက်ရှိပုံစံဖြင့် ချန်ပီယံလိဂ်သည် ဇွန်လနှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ အကြိုခြေစမ်းပွဲသုံးခု၊ ခြေစစ်ပွဲ ၂ ပွဲတွင် ကစားရမည့်ခြေစစ်ပွဲသုံးပွဲနှင့်ကစားပွဲစဉ်များဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအဖွဲ့ (၆) ခုသည် အုပ်စုအဆင့်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအသင်း (၂၆) သင်းနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ထို၃၂ သင်းသည် အသင်းလေးသင်းရှိသည့်အုပ်စု ၈ စုဖြင့် စုစည်း၍ ၂ကျော့ပတ်လည် ကစားသည်။ အုပ်စုဗိုလ် ရှစ်သင်းနှင့် အုပ်စုဒုတိယ ရှစ်သင်းတို့သည် နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကို မေလနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ဇွန်လအစောပိုင်းတွင် အဆုံးသတ်ထားသည်။ ချန်ပီယံလိဂ်၏အနိုင်ရရှိသူသည် နောက်နှစ် ချန်ပီယံလိဂ်၊ ယူအေးဖာ စူပါဖလားနှင့် ဖီဖာ ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မှီသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ၏အကျိုးဆက်ကြောင့် ယူအေးဖာ ပွဲစဉ်များအတွက် ပုံမှန်အချိန်ဇယားကို ပျက်ပြားစေသည်။လက်ကျန်ပွဲစဉ်များအား ပေါ်တူဂီ၊ လစ္စဘွန်းရှိ ကြားနေနေရာများတွင် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ကွာတားဖိုင်နယ်နှင့်ဆီမီးဖိုင်နယ်တို့ကို တစ်ကြိမ်တည်း ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အဖြစ် ကစားခဲ့သည်။
စပိန်ကလပ်များသည် အနိုင်ရရှိမှုအများဆုံး (၁၈ ခု)၊ အင်္ဂလန် (၁၃) ပွဲနှင့်အီတလီ (၁၂) ပွဲ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်အသင်းသည် အနိုင်ရအသင်း (၅သင်း) အများဆုံးဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲကို ကလပ် ၂၂ ခုဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ၁၂ ခုမှာတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအနိုင်ရခဲ့သည်။ ရီးယဲလ် မဒရစ်သည် ပြိုင်ပွဲ၏သမိုင်းတွင် အအောင်မြင်ဆုံးကလပ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပထမရာသီငါးကြိမ်အပါအဝင် ၁၃ ကြိမ် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်သည် (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်တွင် ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်း (၁-၀) ကိုအနိုင်ယူပြီး အနိုင်ရခဲ့သော လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်သည်။
↑ "Football's premier club competition"၊ UEFA၊ 31 January 2010။ 23 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Clubs"၊ UEFA၊ 12 May 2020။ 12 May 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "UEFA Executive Committee approves new club competition". UEFA (Press release).2December 2018. Retrieved2December 2018.
↑ "Matches"၊ Union of European Football Associations၊ 12 May 2020။ 12 May 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Club competition winners do battle။ UEFA (31 January 2010)။ 23 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA Club World Cup။ FIFA။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "European Champions' Cup"၊ Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation၊ 31 January 2010။ 23 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူအေးဖာ_ချန်ပီယံလိဂ်&oldid=543775" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၃:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၃:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။